Ruzha runowanikwa panguva yekufona ne iPhone 8 uye 8 Plus | IPhone nhau
Ruzha runowanikwa panguva yekufona ne iPhone 8 uye 8 Plus
Jesu anotema | | IPhone nhau, iPhone
Vazhinji vashandisi ve iPhone 8 uye 8 Plus ivo vave kutanga kumhan'ara mitsindo inosvota pavanodana kubva pamidziyo yako. Sezviri pachena idzi ruzha dzinobva runhare ruoko uye yakatoonekwa mune dzimwe nguva kuti inogonawo kuuya kubva kumutauri weiyo zvakafanana.
Kunyangwe idzo dzakataurwa bugs dziri vashoma, tichaenda kudonongodza uku kukundikana nezwi riri pazasi uye gadzirisa kusahadzika chero kupi kungamuka maererano nekugadzikana kwayo sechigadzirwa chenyeredzi cheApple sekutanga kwechinyorwa chino.
1 Ruzha panguva yekufona ne iPhone 8 uye 8 Plus
Ruzha panguva yekufona ne iPhone 8 uye 8 Plus
Sezvakataurwa nevamwe vashandisi pavanenge vachifona, neiyo iPhone 8 Plus, iwe unonzwa a ruzha rwusingafadzi uye zvinogumbura kumanikidzwa kwakaringana kwekufona, uko kwayakatangira isingazivikanwe.
Ruzha urwu rwakaonekwa zvese patinoshevedza nenzira yakajairika, ine chinongedzo padyo nenzeve yedu uyezve patinoshandisa mutauri modhi mukudaidzira uku, kunyangwe iyo yekupedzisira isina kutaurwa zvakanyanya. Kana zviri zvekushandisa zvinogadzira izvo, sezviri pachena, zvese zviri. Ndokunge, mafoni iwayo mune a WiFi kubatana, kubatana 4G kana zvakafanana kana chete a kurira kwezwi.
Ehezve, sekutaura kwedu, kana isu tikashandisa wechitatu-bato kunyorera, izvo zvinotipa kugona kwekufona VoiceIP, senge WhatsApp kana Teregiramu, asi zvakaonekwawo kuti kunyangwe muapp yekuzvarwa ye FaceTime ruzha ruchiripo.
Pamusoro pezvo, hazvina basa kuti tiri kupi tichifona, kungava munzvimbo yakavharika kana munzvimbo yakavhurika, ruzha runoramba ruchiramba ruchikanganisa kufona. Anoshandisa iPhone 8 Plus ane dambudziko iri akataura zvinotevera kutsanangura kuti ruzha rwakaita sei uye painonzwisiswa:
Icho chihombe-chakakwiririka, kunge kuputika kweterevhizheni kunoitika nguva nenguva kubva kumusoro kwepamakutu mutauri panguva yekufona. Mamwe mafoni akanaka uye mamwe anoita ruzha. Izvo hazvinzwike mumahedhifoni kana mutauri, chete kuburikidza neyekunzwa nzeve. Munhu anogamuchira kufona haakunzwe. Ini handizive kana ichi chiri Hardware kana software, asi chinhu chimwe chakaita kuti ndifunge kuti zvine chekuita nesoftware ndechekuti kana iwe ukachinjira kune mutauri kwemasekondi mashoma wobva wadzokera kunzeve, iko kutsemuka kwakagadziriswa iyo nguva yekuzorora kwekufona. Dai iri raive dambudziko rehardware ne headset, kuita izvi hakufanirwe kuita mutsauko.
Apple yakatoona kutadza uku Ini ndatotumira mhinduro dzinogona kuratidza kuti kutadza hakukonzerwe neyakaomarara asi zvakapesana. Iko kukanganisa kunoratidzika kunge kuri mu Software saka iwe wave kutotsvaga nzira yekugadzirisa. Parizvino, mhinduro chete iri kupihwa mune izvi ndeiyi dzosera mudziyo ine zvigadziriso zvefekitori uye tanga maitiro ekutanga needu iCloud backup.
Kunyangwe izvi zvakakundikana, vazhinji vevashandisi vakakwanisa kutenga ino terminal havana kuona dambudziko iri, saka haisi nhamba inotyisa. Parizvino, data rekukundikana uku rinozivikanwa chete mu United States, asi kana iwe uri mushandisi we iPhone 8 Plus muSpain uye waona chero ruzha rusinganzwisisike, tinyorere isu mune zvakataurwa kuti tidzidze zvakawanda nezve dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Ruzha runowanikwa panguva yekufona ne iPhone 8 uye 8 Plus
Mhoroi apo !!
Chaizvo zvawataura zvinoitika kwandiri pane yangu iPhone 8 Plus.
Kana iwe uchida rumwe ruzivo ini ndichafara kuupa.
Chinangwa chashe !! idzi nhau dzine hushoma hwesvondo rimwe.Icho chakatogadziridzwa ne ios 11.0.2
Jose Míguez akadaro
Vhiki rino ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekutumira yangu iPhone 7 Plus kuTechnical Service pasi pevimbiso mushure mekuwana zvinotevera zvikanganiso:
- Siri akamira kushanda.
- Iwo mameseji ekuteerera muMessage aiperekedzwa neruzha rwakakonzera kuti meseji irambe iri kumashure uye isinganzwisisike.
- Paunenge uchishandisa iyo yekumberi kamera, iyo chifananidzo chinotaridzika kunge chakakwana, asi odhiyo yaive neyakaenzana yakashata mhando senge muMessage.
Sezvineiwo, mafoni uye odhiyo meseji kubva kuWhatsApp neTeregiramu zvakashanda zvakaringana (izvo zvaizoburitsa dambudziko rehardware pakutanga).
Nenzira imwecheteyo, pandakabatanidza mahedhifoni kana Parrot mumota mangu, zvese zvakadzokera pane zvakajairika naSiri uye ruzha rwakanyangarika.
Mune terminal ine mwedzi minomwe uye mutengo weiyo iPhone 7 Plus, zvese zvinofanirwa kushanda hongu kana hongu.
Zviripachena ndakaidzorera kubva kufekitori ichiwana mhedzisiro.
Ndinofungidzira ichasvika kwandiri Muvhuro unotevera. Pawebhusaiti yekugadzirisa Apple vanoratidza kuti "chigadzirwa chakagadziriswa uye chakatumirwa." Ngatione kuti zvinofamba sei.
Pindura kuna Jose Míguez
Janire Bartolome Lecosaiz akadaro
Pano 1 ine iphone 8 plus mune yazvino vhezheni yeios uye ruzha runopfuurira. Mangwana ndine musangano kuchitoro chepamutemo
Pindura Janire Bartolome Lecosaiz
MIGDELINA GAXIOLA RUELAS akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri ndinobva kuMexico uye pandinofona havandinzwe kana kuti vanondinzwa neruzha rukuru kana vakagona kugadzirisa izvi zvinogona kubatsira
Pindura MIGDELINA GAXIOLA RUELAS
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri ne iphone 7 plus. Ndakagadziridza kuIOS 12.2 uye matambudziko akatanga muFactime, WhatsApp nemavhidhiyo mafoni mune zvese, zvinoita semutauri, uyo mumwe munhu haazvione asi ruzha ruri ruzha. Zvandinogona kuita?
Florence Viglione Lara akadaro
Mhoroi, ini ndiri Florence wekuArgentina, nezuro ndakatenga iyo iPhone 8 uye pandinotaura parunhare zvinoita ruzha rwakatsanangurwa pamusoro. Pandinoshandisa mahedhifoni inomira kuzviita. Izvo zvandinofanira kuita?
Pindura Florencia Viglione Lara
Ndiri kushamiswa kuti aya mazwi andiri kuverenga! Aya mazwi anobva kumakore maviri apfuura uye ndizvo zvimwe chete zvinoitika kune yangu iPhone 2 Plus, havandinzwe zvakanaka uye zvinoita ruzha rukuru, meseji dzewasap dzinongonzwa ruzha uye ini ndinongokwanisa kutaura nekunzwikwa nekuisa mahedhifoni angu. Pane chero munhu anoziva chinhu
Pindura kuna Justa
FERMINA SERRANO ESCOBAR akadaro
ZVAKANAKA, NDINOTENGA BHUKU RITSVA IPHONE 8 PAEBAY uye RINODZORA KUTI APPLE INOTI HANDINA GARANTI UYE DAMBUDZIKO RANGU NDERI:
PANDINOSANGANISA RUDO RWURU POSE PAMUSORO CHETSITSI, ZVINODZIDZISWA NEZVEBHUKU NERUZIVO ZVIRI NAMUVA, HANDI KUZIVA KUTI NDINOGONA SEI DAMBUDZIKO IYE ZVINE ZVINODZIDZA ZVAKAIPA 14.3
Pindura FERMINA SERRANO ESCOBAR
Maria contreras akadaro
Ini ndinobva kuChile neIphone 7 pakufona panopindirana nezwi rinokanganisa kufona, risinganzwisisike asi richinetsa pakuteerera.Pane imwe mhinduro yedambudziko irori.
Pindura kuna Maria Contreras
Apple inotangisa zviri pamutemo iOS 11.0.2 kune vese vashandisi
Nyanga dzeiyo iPhone X, chayo nyowani nyowani